Nagu saabsan - Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd.
Waxaan dooneynaa horumar guud oo lala yeesho dhammaan wada-hawlgalayaasha muddada-dheer waxaanan ku dadaalnaa inaan wax ku biirino aadanaha iyo dhulka.
Dadka u janjeedha, badbaadada iyo ilaalinta deegaanka, sayniska iyo sumadda tikniyoolajiyadda
Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd. waa shirkado kiimiko casri ah. U hogaansanaanta falsafada horumarka ee "noqoshada dadka u janjeedha, nabdoonaanta iyo bey'ada-saaxiibtinimo, iyo astaan ​​farsamo", waxaan iskaashi la leenahay machadyo badan oo cilmi baaris ku sameeya kiimikada gudaha iyo kuwa caalamiga ah si loo soo bandhigo habab wax soo saar horumarsan oo qaan gaar ah si loo soo saaro taxane alaab tayo leh , oo ay ku jiraan 50,000 t / a of 3-Chloro-2-methylpropene (MAC); 28,000 t / a oo ah 2-Methyl-2-propen-1-ol (MAOH); 8,000 t / a oo ah Sodium methallyl sulfonate (SMAS); 5,000 t / a of acrylic fiber oil and 2,000 t / a of polyimide fiber, iwm Sababtoo ah hal-abuurnimo farsamo oo isdaba-joog ah, waxaan leenahay awoodo wanaagsan oo aan ku xoojin karno tartanka badeecadaha suuqa.
Waqtigan xaadirka ah, badeecadeenu si wanaagsan ayaa looga iibiyaa in ka badan 50 dal sida Mareykanka, Japan, Jarmalka iyo Faransiiska, iwm. Isla mar ahaantaana, waxaan si guul leh u noqonnay shirkad loogu talagalay PetroChina iyo Sinopec, iyo lammaanaha adduunka ugu sarreeya 500 shirkadood.
Iyada oo codsiyo sanado ah, alaabtayada ayaa si heer sare ah u aqoonsadeen macaamiisheennu tayo iyo sumcad aad u fiican. Hada, alaabtayada waxaa si weyn loogu isticmaalay kiimikooyinka batroolka, dawooyinka, sunta cayayaanka, cadarka, kaabayaasheeda fiber acrylic, jiilkii ugu dambeeyay ee wakiilka yareya biyo-hufnaanta sare ee warshadaha la taaban karo iyo warshadaha sameeya, iwm. oo ay ka mid yihiin saliidaha malab-sida Porous-ka ah iyo saliidaha jiilka cusub ee khaaska u ah rinjiyeynta cudbiga iyo wareejinta ayaa xaliyay dhibaatooyin badan oo ku saabsan tolida, oo ay ka mid yihiin xawaaraha sare ee muruqyada 'Porous' iyo malab-u-ekaanta wax ka beddelka maadada polyester, taabashada suufka midabka leh, iyo xawaaraha antistatic iyo wareejinta , iwm
Waxaan aaminsanahay inaan hogaamiye u noqon doonno ganacsigan adduunka ka socda xagga tayada iyo qiimaha! "Alaab tayo leh, qiimo wanaagsan iyo adeegyo daacad ah" waa ballanqaadkeenna. Waxaan dooneynaa horumar guud oo lala yeesho dhammaan wada-hawlgalayaasha muddada-dheer waxaanan ku dadaalnaa inaan ka dhigno wax-ku-oolnimadayada aadanaha iyo dhulka.
Falsafadda ganacsiga ee shirkadda
Falsafadda ganacsiga ee shirkaddu waa nafta dhaqanka shirkadaha, jihada horumarka shirkadda, mabda'a nolosha shirkadda, iyo awoodda shirkaddu ku uruuriso dadka. Markay shirkaddu gaarto heer gaar ah, waa inay xallisaa saddex dhibaato. Mid waa sababta ay lagama maarmaan u tahay in la maamulo shirkad. Shirkad noocee ah inay socodsiiso, tani waa su'aasha ujeedka iyo himilada shirkaddu leedahay. Midda labaad waa sida loo maamulo shirkad. Tani waa su'aal ku saabsan habka. Midda saddexaad waa ku tiirsanaanta cidda maamusha ganacsiga. Tani waa furaha guusha ganacsiga. Saddexdaas dhibaato waa dhibaatooyinka lagu xallin karo falsafadda ganacsi ee shirkadda. Markii aan aasaasnay ​​falsafadda ganacsi ee shirkadda, iyadoo lagu saleynayo fahamkeenna saddexdaas arrimood, waxaan dejinnay ujeeddada "abuurista maal iyo horumar is waafajinaya" iyo qiyamka "hal-abuurnimo, is-waafajin, iyo horumar." Hadafkeenu waa in aan ka dhisno shirkad gudaha ah A-fasal-koowaad, soo saare caalami-xirfadlayaal u ah kaaliyeyaasha warshadaha fiber-kiimikada, saliidaha iyo dareeraha.
Alaabooyin Tayo Sare leh, Qiimayaal Mudnaan Leh, Adeeg Daacad ah